कला / साहित्य Archives - Mega Online Television
चलचित्र ‘हजार जुनी सम्म’को ‘एमजी रोडैमा’ बोलको गीतको भिडियो रिलिज गरिएको छ । काठमाण्डौमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा राजनराज सिवाकोटी र मेलिना राइको आवाजमा समावेश गीत सार्वजनिक गरिएको हो । सार्वजनिक गीतमा राजनराजको शब्द तथा संगीत छ । गीतको भिडियोलाई सिक्किमको एमजी रोडमा खिचिएको हो । गीतको भिडियोमा कोरसको प्रयोग उल्लेख्य गरिएको छ । भिडियोमा चलचित्रका मुख्य कलाकारहरु स्वस्तिमा खड्का, सलोन बस्नेत, अखिलेस प्रधानलाई फिचरिङ गरिएको छ । कविराज गहतराजले कोरियोग्राफी गरेको गीतको भिडियोलाई पुरुषोत्तम प्रधानले खिचेका हुन् । विकासराज आचार्यको निर्देशनमा तयार भएको चलचित्रमा पटकथा तथा संवाद विकास र सामिप्यराज…
विश्व ज्योतीष महासंघ प्रदेश न. ३ सदस्यतामा भट्ट गुरु नियुिक्त
६ बैशाख, काठमाडौँ । विश्व ज्योतिष महासंघको २४ औँ वार्षिकउत्सव काठमाडौँको बागबजार स्थित होटल हार्दिकमा भव्य रुपमा सम्पन्न भएको छ । कार्यक्रम कै अवसरमा ज्योतिष तथा वस्तु क्षेत्रमा रहेर काम गर्दै आउनुभएका ज्योतिष भट्टगुरु विश्व ज्योतिष महासंघको प्रदेश न. ३ को सदस्यतामा तीन वर्षको लागि नियुक्ति हुनुभएको छ । ज्योतिष शास्त्रलाइ धेरै नियाल्दै आएको र यस शास्त्रबाट धेरै मानिसका जीवनमा भएका समस्याको समाधान सजिलै संग गर्ने र धेरै खोज अनुसन्धान गरेको हुनाले कार्यक्रममा भट्ट गुरुलाइ प्रदेश न. ३ को सदस्य पदमा तीन वर्षको लागि चयन गरिएको छ ।…
कला / साहित्य प्रदेश समाचार
महानगरबाट स्वयम्भू र हनुमानढोका दरबार क्षेत्रलाई जोड्ने गुरुयोजना सार्वजनिक
५ बैशाख, काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले दुई हजार २०० मिटरको दूरीमा रहेका दुई विश्व सम्पदा क्षेत्र स्वयम्भू र हनुमानढोका दरबार क्षेत्रलाई जोड्ने गुरुयोजना सार्वजनिक गरेको छ । बिहिबार विश्व सम्पदा दिवस २०७६ को अवसरमा काठमाडौंको हनुमानढोकाबाट महानगरले उक्त गुरुयोजना सार्वजनिक गरेको हो । सम्पदा पदयात्रा नाम दिइएको गुरुयोजनामा संस्कृति तथा रीतिस्थितिलाई पर्यटकीय व्यवस्थापनसँग जोडेर स्थानीय जीविकोपार्जन सुधार गर्ने र मूर्त अमूर्त सांस्कृतिक पक्षको पुस्तान्तरण गर्ने कामलाई लक्ष्य बनाइएको महानगरका प्रमुख बिद्यासुन्दर शाक्यले जानकारी दिनुभयो । स्वयम्भू र हनुमानढोकाबीचमा अवलोकनयोग्य प्रशस्त संरचना रहेकाले यी स्थान तय गरिएको उहाले बताउनुभयो ।…
Featured कला / साहित्य बिशेष राजनीति समाचार
बिस्केट जात्राको आज अन्तिम दिन हात नभएको लिङ्गो ढालि पर्व मनाउदैँ
५ बैशाख, भक्तपुर । भक्तपुरमा आठरात नौ दिनसम्म मनाइने बिस्केट जात्राको अन्तिम दिन बिहिबार स्थानीय कुमाले टोलमा हात नभएको लिङ्गो ढालिएको छ । प्रत्येक वर्ष चैत मसान्तका दिन बिहान तान्त्रिक विधिअनुरूप पूजाअर्चना गरी कुमाले टोलमा उभ्याइएको उक्त लिङ्गो विधिपूर्वक रूपमा पूजाअर्चना गरेर बिहिबार ढालिएको हो । बिस्केटामा उठाइने लिङ्गो हेर्नाले शत्रु नाशहुने र बैभव प्राप्त हुने जनविश्वस रहेको जानकारहरुको भनाई छ । बिस्केट जात्रा भित्रको महत्वपूर्ण जात्रा लिङ्गो उठाउने जात्रा भएकाले विधिपूर्वक पूजापाठ गरी लिङ्गो ढालिएको जनाइएको छ । त्यस्तै भैरवनाथ र भद्रकालीको रथ तानेर सुरु भएको बिस्केट जात्रा बिहिबार…
Featured कला / साहित्य बिशेष मनोरन्जन समाचार
नेपाल हिरो अफ टयालेन्ट सो अन्र्तगत नयाँ प्रतिभा छान्न बुधबार धरानमा अडिसन हुदै
April 9, 2019 April 9, 2019 Editorial Team
काठमाडौ, २६ चैत– हिजोदेखी शुरुभएको नेपाल हिरो अफ टयालेन्ट सो अन्र्तगतको पहिलो अडिसन झापाको बिर्तामोडमा सम्पन्न भएको छ । झापाको बिर्तामोड स्थित अतिथि सदनमा भएको अडिसनमा उल्लेख्य मात्रामा सर्वसाधरणको सहभागिता भएको थियो । हिजो र आजभएको अडिसनमा ठुलो संख्यामा प्रतिस्पर्धी सहभागि भएपनि १४ जनालाई मात्रै काठमाडौ अडिसनका लागि लगिने एन्जल मिडियाका प्रबन्धक प्रेम कुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । झापाको बिर्तामोड पछि बुधबार अर्थात भोलीदेखी धरान अडिसन शुरु हुने उहाँले जानकारी दिनुभयो । धरानको सभागृहमा हुने अडिसनमा भाग लिएर आफनो प्रतिभा देखाउन प्रबन्धक श्रेष्ठले सबैमा आग्रह गर्नुभयो । नेपालका सातै प्रदेशका…